परमेश्वरको राज्य—यसमा हामीले किन चासो लिनुपर्छ?
किन प्रार्थना गर्ने? के ईश्वरले मेरो प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्छ?
परमेश्वरको राज्यमा किन चासो लिनुपर्छ?
लाखौं मानिसहरू परमेश्वरको राज्यले मात्र संसारका सबै समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छ भनी विश्वास गर्छन्‌। तिनीहरू येशू ख्रीष्टको अनुकरण गर्छन्‌, जसले आफ्ना चेलाहरूलाई यसरी प्रार्थना गर्न सिकाउनुभएको थियो: “तपाईंको राज्य आओस्। तपाईंको इच्छा जसरी स्वर्गमा पूरा भइरहेको छ, त्यसरी नै पृथ्वीमा पनि पूरा होस्।”—मत्ती ६:१०.
तर छक्कलाग्दो कुरा, धेरै मानिसले परमेश्वरको राज्यमा चासो लिए तापनि थुप्रै धर्मले भने यो विषयलाई वास्ता गरेको छैन। यसै सन्दर्भमा इतिहासकार एच. जी वेल्सले यसो भने: “येशूले स्वर्गको राज्यको विषयमा सिकाउनुभयो र यो शिक्षालाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिनुभयो। तर थुप्रै चर्चले भने आफ्नो शिक्षामा परमेश्वरको राज्यलाई खासै महत्त्व दिएको पाइँदैन।”
तर ती चर्चहरूको ठीक विपरीत, यहोवाका साक्षीहरू भने परमेश्वरको राज्यलाई निकै महत्त्व दिन्छन्‌। उदाहरणका लागि तपाईंले अहिले पढिरहनुभएको यो पत्रिका हाम्रो मुख्य पत्रिका हो र २२० भाषामा प्रकाशित हुन्छ। यसको हरेक अङ्क झन्डै ४ करोड ६० लाख प्रति छापिन्छ। यो संसारकै सबैभन्दा धेरै वितरण हुने पत्रिका हो। अनि यस पत्रिकाको मुख्य सन्देश के हो? यस पत्रिकाको शीर्षक यस्तो छ: प्रहरीधरहरा यहोवाको राज्यको घोषणा गर्छ। *
परमेश्वरको राज्यको घोषणा गर्न यहोवाका साक्षीहरू किन यत्ति धेरै मेहनत गर्छन्‌? पहिलो कारण, संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण किताब बाइबलको मुख्य सन्देश परमेश्वरको राज्य हो भनी हामी विश्वास गर्छौं। अनि अर्को कारण चाहिं मानिसहरूले आज भोगिरहेका समस्याहरूको समाधान परमेश्वरको राज्यले मात्र गर्न सक्छ भनी हामी विश्वस्त छौं।
परमेश्वरको राज्यतर्फ मानिसहरूको ध्यान खिच्न यहोवाका साक्षीहरूले येशू ख्रीष्टको उदाहरण अनुकरण गर्ने प्रयास गरेका छन्‌। येशू पृथ्वीमा हुनुहुँदा उहाँले परमेश्वरको राज्यलाई आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा धेरै महत्त्व दिनुभयो र मानिसहरूलाई प्रचार गर्दा यही राज्यलाई आफ्नो मुख्य विषय बनाउनुभयो। (लूका ४:४३) येशूको लागि परमेश्वरको राज्य किन त्यत्ति धेरै महत्त्वपूर्ण थियो? अनि तपाईंको लागि पनि यो किन महत्त्वपूर्ण छ? बाइबलले यी प्रश्नहरूको जवाफ कसरी दिन्छ, कृपया यसपछिका लेखहरूमा पढ्नुहोस्।
^ अनु.5बाइबलअनुसार परमेश्वरको नाउँ यहोवा हो।